श्रीमानले छोडेपछि सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटीईन आमा, कसैले नि हेरेनन बुढेसकालमा घर न घाटको भन्दै रुवाबासी(भिडियो हेर्नुहोस ) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारश्रीमानले छोडेपछि सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटीईन आमा, कसैले नि हेरेनन बुढेसकालमा घर न घाटको भन्दै रुवाबासी(भिडियो हेर्नुहोस )
श्रीमानले छोडेपछि सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटीईन आमा, कसैले नि हेरेनन बुढेसकालमा घर न घाटको भन्दै रुवाबासी(भिडियो हेर्नुहोस )
December 5, 2020 admin समाचार 968
जब मानिसलाई पिडा पर्छ तब मात्र थाहा हुन्छ सुख, पिडा र रोदनको असली कुरा र यस्को दर्दनाक अवस्था पनि । हो आज हामी यस्तै आफनै श्रीमानबाट बुढेसकालमा पनि यसरी पिडित भएर सडक पेटीमा भौतारिदै हिडेकी एउटी बूढी आमाको बारेमा कुरा गर्दैछौ । यि आमाको घर गोर्खा हो नाम बिबा खनाल जो अहिले ५० बर्ष भन्दा बढी भईन तर यिनको पिडा भने उस्तै छ । सानैबाट पिडापिडैमा हुर्केकी यिनी पिडा लुकाउन रातभरि रुने गर्छिन ।
आफन्त र इष्टमित्रले पनि हेरेनन नत आफनै सनतानले । भन्छन नि बुढेसकालमा के के सहनपर्छ के के देख्नपर्छ त्यो साचो भएको छ यि आमाको जिन्दगीमा । पिडा भुलाउन बेला बेलामा गित गाएरै आफै भित्र रमाउने गर्छिन । गित लेख्छिन, आफैभित्र खुशी हुन्छिन तैपनि पिडाले कहिले साथ छोडदैन ।
यि आमाका छोरीहरु पनि धेरै छन, धेरैचोटि छोरीको घरमा गएर पनि बसिन तर सासु ससुराले के भन्लान ? र छिमेकीले के सोच्लान ? भनेर अहिले भागेर काठमाडौ आएकी छिन । रुदै हार गुहार गर्छिन मलाई सहयोग गर भन्छिन तर कसैले सुन्दैनन, हेरौ यि सडकमा भौतारिएको आमाको दर्दनाक ब्यथा । ﻿
मम्मीको पेटमा बच्चा थियो तर अर्कैसंग भाग्नु भो छोराछोरीले खोले वास्तविकता (भिडियो)
मास्क नलगाउँदा प्रहरीले १६ सय तिराएपछि बिरोध गर्ने श्रीमतीलाई श्रीमानले पुलिसकै अगाडी थ’प्पड लगाए !
November 28, 2020 admin समाचार 1526
प्रेम सबैले गर्छन् । तर प्रेममा परियो भन्दैमा जहाँ पायो त्यहि मस्ती गर्न खोज्दा नमज्जाले लाजमर्दोमा परिन्छ पनि । यस्तै भएको छ एक सरकारी विद्यालयका डेड सरलाई । यो कुनै ए’डल्ट फिल्मको दृष्य होइन ।
December 27, 2020 admin समाचार 3058
December 28, 2020 admin समाचार 778
LEX 18 agenda conversation: Job club (403578)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378219)
Hello world! (313858)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (288642)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104745)